Amaphoyisa axwayise abezitokofela | News24
Amaphoyisa axwayise abezitokofela
AMAPHOYISA aKwaZulu-Natal axwayisa abezitokofela njengoba sekusondele izinsuku zama holidi nokuhlukaniswa kwezitokofela.
Okhulumela amaphoyisa aKwazulu-Natal uLieutenant Colonel Thulani Zwane we-KZN Media Center uthe njengabo mthetho bathanda ukululeka labo abadlala izitokofela ngenhloso yokugwema ukulahlekelwa izimali zabo abazisebenzele kanzima nokuthi bagweme izigebengu ngalesikathi.
“Sinxusa bonke labo bamakilabu ezitokofela ukuba bazijwayeze ukucophelela umabehlukanisa izimali,” kusho uZwane.
Uthe esikhundleni sokuthi bekhiphe izimali ezinkulu emabhange kunga ngcono ukuthi besebenzise izindlela ezilula zokuthumela imali kuma- account amalungu abo.
“Labo abengenawo ama-account kumele bewabhalisele emabhange kusenesikhathi ukuze bagweme ubugebengu.”
Uqhube wathi abezitokofela bangakwazi ukucela amaphoyisa ukuba agade izindawo lapho bezohlukanisela izimali zabo. Lokho kuzosiza ekutheni izigebengu zingasondeli.
“Noma sezifakiwe izimali kuma-account kuyanxuswa ukuthi umuntu angakhiphi isamba semali kuma-ATM, ikakhulukazi uma sekuyizikhathi zantambama lapho sekuthulekile emadolobheni ngoba izona zikhathi lapho izigebengu zisebenza khona.”
Uthe uma umuntu ezodinga imali eningi kungcono ayikhiphe enxanxatheleni yezitolo
(mall) ngesikhathi zomsebenzi.”